Lamborghini အသွင် ထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးမှုနဲ့မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ Hyundai Elantra ! – MyMedia Myanmar
Lamborghini အသွင် ထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးမှုနဲ့မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ Hyundai Elantra !
Hyundai Elantra လို့ ဆိုလိုက်ရင်တော့ တကယ်ကို စီးရတာ ကောင်းမွန်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ မိသားစုစီး Sedan ကားကောင်း တစ်စီးအဖြစ် မြင်တွေ့ကြမှာ ဖြစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ် ၃ ခု လောက် အထိကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဈေးကွက်တွေထဲမှာ အောင်မြင်ထားပြီးသား ကားတစ်စီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီ နှစ်တွေတုန်းကပဲ Hyundai ဟာ သူတို့ရဲ့ Brand Image ကို မြှင့်တင်ရာမှာ N-Line ဆို တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အသားပေး ကားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အုပ်စုထဲကို Elantra N အသစ်လည်း ဝင်ရောက်လာဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မကြာသေးမီကပဲ ကုမ္ပဏီ ဘက်ကနေ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အခုသတင်းဟာ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းနေတာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါကားကို မစောင့်နိုင်တော့လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ထူးခြားတာ တစ် ခုတော့ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကတော့ အခုလိုမျိုး ထွက်ရှိထားပြီးသား သာမန် Elantra ကို Lamborghini ပုံစံ အသားပေး ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပြီး လမ်းမပေါ်ချပြ လိုက်တာ မျိုးပါပဲ။
သေချာတာကတော့ အခုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အဆိုပါ ထူးထူးခြားခြား ပြင်ဆင်မှုမှာ တရားဝင် ထွက်ပေါ်လာမယ့် N Version နဲ့တောင် လုံးဝကွဲထွက်နေမှာ သေချာလို့ နေပါတယ်။ အခုလို ပြင်ဆင် လိုက်တဲ့ ကားရဲ့ အမည်ကိုတော့ ‘Project VX’ လို့ ပေးထားပြီး အိန္ဒိယ ရဲ့ Elantra MD တစ်ခု အပေါ် အခြေခံ ပြီးတည်ဆောက် လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Xander က ပြောကြား ရာမှာ တော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ တကယ့်ကို ထူးခြားတဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ရပ် အဖြစ် မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ် လို့ ဂုဏ်ယူစွာ ဆိုခဲ့ပြီး တပ်ဆင်ပြောင်းလဲ ပေးထားတဲ့ အသေးစိတ်ပစ္စည်း အချက်အလက် မှန်သမျှဟာ တကယ်ကို အသက်ဝင် လွန်းတယ်လို့လည်း ဆိုထား ခဲ့ပါတယ်။ အဝါရောင် တောက်တောက်နဲ့ မြင်တွေ့ထား ရတဲ့ အဆိုပါ ကားအသစ်မှာ ဆိုရင် JGTC Aerodynamics ABS Body Kit ကို တပ်ဆင် ထားတာ ဖြစ်ပြီး Monster Diffuser ၊ Lambo အသွင် ကိုယူထားတဲ့ Door Intake Ducts တွေအပြင် Roof Spoiler နဲ့ Fender Wing Splitter တွေကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားကာ Bumper LED DRLs တစ်စုံကို လည်း ဖြည့်စွက် ပေးထား ပါသေးတယ်။ ကားရဲ့ အတွင်းခန်းမှာ ဆိုရင်တော့ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Dual-Tone Colour ကိုမှ Sports အသွင် ပြောင်းလဲ ခြယ်သလိုက်တာ ဖြစ်ကာ Alcantara ရဲ့ စတီယာတိုင်နဲ့ Carbon Fiber Trims တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားတာ ကိုတွေ့ရဦးမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Xander ရဲ့ နောက်ထပ် ပေါင်းထည့်ထားသေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု အဖြစ်တော့ Avan Acoustics အသံစနစ်နဲ့ အနက်ရောင် Roof Liner ကိုမှ ကြယ်ပုံစံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ် ပေးထား ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ကားမှာ ၁၈ လက်မ အရွယ် ရှိ မယ့် AS Alloy Wheels တွေကိုလည်း တပ်ဆင် ပေးထားသေးပြီး ကားရဲ့ အိတ်ဇောကိုလည်း Akrapovic CF စနစ် ထည့်သွင်း အသုံး ပြုပေး ထားပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ပြောကြား ထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့်လို့ ယူဆ ကြည့် ရသလောက်တော့ အလှပြထားမယ့် ကားတစ်စီး အဆင့်ထက်တော့ ပိုနိုင် လောက်ပါတယ်။
အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်းက Elantra ဆိုရင် Mild 2.0 Liter Four-Pot Engine ကို တပ်ဆင် ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး 147 hp နဲ့ 132 lb-ft Torque အထိ ရှိထားကာ ဒီအနေအထား ကတော့ သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မရှိသေးပဲ သာမန်ပဲလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသစ်ထွက်လာဖို့ ရှိနေတဲ့ Elantra N မှာ ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလာနိုင်ပြီး 1.6 Liter Turbocharged Engine ကို တပ်ဆင်ပေးလာနိုင်ကာ 275 hp ဝန်းကျင်နဲ့ 278 lb-ft Torque လောက်အထိကို တိုးတက်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အခုလိုမျိုး Xander ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်တွေ ၊ အားစိုက်မှုတွေနဲ့ အခုလိုမျိုး တည်ဆောက် ဖို့အတွက် စိတ်နှစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာတွေ အတွက်ကတော့ တကယ်ကို ချီးကျုး သဘောကျချင်စရာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Lamborghini အသွင် ထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးမှုနဲ့မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ Hyundai Elantra ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-17T11:01:42+06:30January 17th, 2021|MYCARS MYANMAR|